Tag: kutsigira | Martech Zone
Chitatu, September 26, 2012 Chipiri, Gunyana 25, 2012 Douglas Karr
Pasina kutsigirwa, isu hatingave tiine yakawanda blog Izvi zvinoreva kuti iwe uri kubatsirwa kubva kune vatinotsigira, zvakare! Tine mari yekutsigira, isu tave kukwanisa kuenderera nekuvandudza dhizaini saiti, kuburitsa mafoni uye mapiritsi vhezheni, kuva nepodcast yakasimba uye kuenderera mberi nekushanda pazvinhu zvitsva - sekumutsiridza chirongwa cheemail nekuwana nyowani mbozhanhare yekushandisa. Iko kuisa mari, hongu, zvakare kunobatsira vedu vanotitsigira sezvatinoramba tichikura uye
Chakavanzika chekuvaka Chiremera uye Kusimudzira yako Blog
Svondo, October 12, 2008 China, Gunyana 25, 2014 Douglas Karr
Ini ndakanyora kare nezvekuti zvinobatsira sei Google Alerts senge zano rekuremekedza manejimendi. Heano zano rakakura kwauri kuti utyaire masimba iwe pachako, chigadzirwa chako kana sevhisi yako uye kubatsira kusimudzira saiti yako kana bhurogi uchishandisa LinkedIn Mhinduro uye Google Alerts. Nezve mazwi iwe aunoda kuvaka masimba mukati meLinkedIn, gadzira Google Alert! Sarudza "Webhu" semhando uye "se- zvinoitika" kuti kangani. Muenzaniso: Kana ndichida